Zoma 4 Septambra 2020
Kalandrie Ity dia alimanaka ho an'ny latabatra vita amin'ny fanamboarana fahatapahan-dahatsoratra izay manana motif amin'ny vanim-potoana amin'ny fitrandrahana mahafinaritra. Ny misongadina ny famolavolana dia rehefa aseho, ny motif vanim-potoana dia napetraka amin'ny zoro 30 degre mba hijery tsara indrindra. Ity endrika vaovao ity dia mampiseho ny zava-boarimihetsika NTT COMWARE amin'ny famoronana hevitra vaovao. Ny eritreritra dia nomena ny fiasana kalandrie misy habaka fanoratana sy andalana maro. Tsara ny fijerena haingana sy mora ampiasaina, mameno ny fihaviany izay mampiavaka azy amin'kalandrie hafa.
Alakamisy 3 Septambra 2020
Ny Firavaka Ny hevitra fototra amin'ny odyssey nataon'i monomer dia misy ny mandrakotra endrika volom-borona, geometrika miaraka amin'ny hoditra modely. Avy amin'izany dia miteraka fifanjevoana sy fanilikilihana, fangaraharana ary manafina. Ny endri-javatra sy ny endrika geometrika rehetra dia azo atambatra amin'ny sitrapo, miovaova ary mifangaro amin'ny fampiana fanampiny. Ity hevitra mahavariana sy tsotra ity dia mamela ny famoronana endrika marika saika tsy manam-pahaizana loatra, mifanaraka tsara amin'ny fotoana omen'ny mpanamory haingana (pirinty 3D), satria ny mpanjifany tsirairay dia afaka manana zavatra iray manokana sy tsy manam-paharoa novokarina (fitsidihana: www.monomer. EU-tsena).
Ny Vovoka Sy Ny Kitapo
Alarobia 2 Septambra 2020
Ny Vovoka Sy Ny Kitapo Ropo dia vovoka fanalan-javatra sy foto-pisakafoanana mangatsiaka, izay tsy mianjera amin'ny tany. Noho ny lanjan'ny tankina rano izay hita ao amin'ny efitrano ambanin'ny vovoka, i Ropo dia mandanjalanja ny tenany. Rehefa avy nanakodia moramora ny vovoka noho ny fanampian'ny molotra mahitsy ny mpampiasa, dia azon'ny mpampiasa atao ny manja ny kifafa sy ny vovoka ary mametraka azy ho singa tokana tsy misy fiahiahiana azy io. Ny endrika voajanahary maoderina dia mikendry ny hitondra fahatsorana ho any amin'ny efitrano anatiny ary ny endri-javatra wobble miaka-jaza dia mikasa ny hanome vahana ny mpampiasa mandritra ny fanadiovana ny gorodona.
Talata 1 Septambra 2020
Seza Ny talanton'ny sandry Baralho dia manana endrika famolavolana mahaliana ankehitriny izay mifangaro amin'ny endrika madio sy tsipika mahitsy. Vita amin'ny faribolana sy ny lasantsy eo amin'ny takelaka vita amin'ny aluminium, ity seza ity dia mijoro ho an'ny fahasamihafana izay miatrika fanamby ny tanjaky ny fitaovana. Izy io dia afaka miara-manangona, amin'ny singa iray, hatsaran-tarehy, hazavana ary ny filaminan'ny tsipika sy zoro.
Ny Fivarotana Sefom-Pokonolona
Alatsinainy 31 Aogositra 2020
Ny Fivarotana Sefom-Pokonolona Ny Lenovo Flagship Store dia mikendry ny hanatsara ny sarin'ny marika amin'ny fanomezana sehatra ho an'ny mpijery amin'ny sehatra iray ahafahana mampifandray ny fifandraisana ary mizara amin'ny alàlan'ny fomba fiaina, serivisy ary traikefa noforonina anaty. Ny foto-kevitra momba ny famolavolana dia noforonina avy amin'ny iraka hampanaovana famindrana avy amin'ny mpanamboatra fitaovana ho an'ny marika malaza eo amin'ireo mpamatsy elektronika mpanjifa.
Ny Marika Divay
Alahady 30 Aogositra 2020
Ny Marika Divay Ny famoronana "Elemente 5" dia vokatry ny tetikasa iray, izay natokisan'ny mpanjifa ny masoivoho famolavolana manana fahalalahana maneho hevitra feno. Ny tena mampiavaka an'io famolavolana io dia ny toetran'ny Romanina "V", izay mamaritra ny hevi-dehibe ao amin'ilay vokatra - karazana divay dimy mifangaro ao anaty tsangaro tokana. Ny taratasy manokana ampiasaina ho an'ny marika ary koa ny fametrahana stratejika ireo singa sary rehetra dia manery ny mpanjifa handray ny tavoahangy ka hanodikodina azy ireo, hikasika azy io, izay azo antoka fa mahatonga fahatsapana lalindalina kokoa ary manadino kokoa ny famolavolana.
Decor Sary Fametahana Sary Zoma 14 Mey
Only Right Here Tompona Antsy Alakamisy 13 Mey
180º North East Tantara Alarobia 12 Mey
Fanadihadihana famolavolana ny andro Zoma 14 Mey
Tantara momba ny andro Alakamisy 13 Mey
Famolavolana ny andro Alarobia 12 Mey
Mpamorona ny andro Talata 11 Mey
Ekipa mpamorona ny andro Alatsinainy 10 Mey
Kalandrie Ny Firavaka Ny Vovoka Sy Ny Kitapo Seza Ny Fivarotana Sefom-Pokonolona Ny Marika Divay